Miverena any anaty ala miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny tetikasa Blair Witch - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Miverena any anaty ala miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny tetikasa Blair Witch
Miverena any anaty ala miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny tetikasa Blair Witch
by Admin Febroary 17, 2015
by Admin Febroary 17, 2015 772 hevitra
Na tianao izany, matahotra azy na mankahala azy, tsy azo lavina izany Ny Tetikasa mpamosavy Blair dia iray amin'ireo sarimihetsika manan-kery sy mamaky tany amin'ny tantaran'ny horohoro. Navoaka tamin'ny taona 1999, ny sarimihetsika misy teti-bola ambany dia omena tombony amin'ny fanombohana ny karazana sokajy hita - ary mamporisika anao izahay tsy hanome tsiny izany noho ireo kopia miisa 10,001 tonga teo am-piandohana!
Misy sarimihetsika mahatsiravina vitsivitsy izay tena nampihorohoro ny mpijery mihoatra ny Ny Tetikasa mpamosavy Blair, izay nanana fampielezan-kevitra mamirapiratra toy izany ka maro no resy lahatra tamin'ny voalohany fa asa tsy foronina. Na dia fantatsika aza ankehitriny ny marina, dia mbola mampatahotra mafy toy ny taloha ihany, efa ho roapolo taona taty aoriana.
Eo am-piandrasana Ny tetikasa mpamosavy Blair 3, naseho fotsiny fa efa an-dàlana ny fanadihadiana momba ilay horonantsary voalohany. Mitondra ny lohateny hoe Aptly Sarimihetsika The Woods, ny halavan'ny endri-javatra dia hitondra anao any ambadiky ny seho ny famoronana sarimihetsika malaza, manolotra fidirana mbola tsy nisy toa azy io.
Ity ny crunch ofisialy ofisialy:
Tamin'ny volana oktobra 1997 dia nisy vondrona mpamorona sarimihetsika niditra an-tsokosoko tany anaty ala Maryland hamokatra sarimihetsika mampatahotra tsy miankina amin'ny teti-bola ambany. NY PROJECT WITCH BLAIR WITCH dia ho lasa tranga manerantany ary nanomboka ny karazana "sary hita" izay mijanona ho hery matanjaka ankehitriny. Sambany ianao izao dia afaka mahita ny fomba namoronana ity mpamaky groundbreaking ity. Manomboka amin'ny firaketana an-tsary ny fihaonana mialoha ny famokarana, horonam-peo, ary horonantsary fanandramana ka hatramin'ny fitifirana, fandefasana topi-maso voalohany ary fivarotana amin'ny Fetiben'ny horonan-tsary Sundance, ireo mpiasa manan-danja rehetra dia mitarika anao amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanapahan-kevitra izay nanondro ny fahagagana fahatsapana kilasika.
Zahao ny tranofiara momba ny dokotera etsy ambany, izay kasaina hatao premiere amin'ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny FrightFest Glasgow.